Khin Ma Ma Myo's Blog: August 2011
ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက တူတူပုန်းတမ်း ကစားကြတဲ့အခါ ပုန်းနေသူက အသံပေးရပြီး၊ လိုက်ရှာသူက တူတူ အသံပေးရာကို လိုက်ရှာရပါတယ်။ တခါတရံကျတော့လဲ ပုန်းနေသူက လေးငါးယောက်၊ လိုက်ရှာသူက တယောက်ဖြစ်ပြီး အရင်ဆုံးမိတဲ့သူက တခါပြန်ပြီး လိုက်ရှာသူ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါက ကလေးဘ၀ ကစားကြတဲ့ အခါတုန်းကပါ။
လူကြီးဘ၀မှာ ဂိမ်းတွေ ကစားကြတဲ့အခါကျတော့ ပုန်းတမ်းရှာတမ်း ကစားရတာက တူတူပုန်းတမ်း ကစား သလောက် မလွယ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပုန်းနေသူက အသံပေးရတာ မဟုတ်ပဲ၊ ရှာဖွေသူ ကသာ ပုန်းနေသူရဲ့ သဲလွန်စကို ဥာဏ်လွှာပြီး လိုက်ရှာကြရတာကြောင့်ပါ။
လူတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) အင်စတီကျူးရှင်းတစ်ခုရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ အခြားလူတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) အခြားအက်စတီကျူးရှင်းတခုရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာ အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက် မှုတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒီလူနှစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) အင်စတီကျူးရှင်းနှစ်ရပ် အကြားမှာ မဟာဗျူဟာအရ အပြန်အလှန် မှီခိုဆက်စပ်မှု (strategic interdependence) ဖြစ်တည်နေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တဘက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် (သို့မဟုတ်) ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ အခြားတဘက်ကို သက်ရောက်မှု ရှိနေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဂိမ်းသီအိုရီရှုထောင့်အရ strategic games လို့ သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ ဒီဂိမ်းတွေမှာ ပါဝင်နေသူတွေကိုတော့ ဂိမ်းကစားသူများ (players) လို့ သတ်မှတ်ကြပြီး၊ ဂိမ်းကစားသူများ အပြန်အလှန် အသုံးပြုကြတဲ့ လှုပ်ရှားမှု အစီအမံတွေကိုတော့ strategy လို့ ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
strategic games တွေဟာ နေရာတကာမှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ သားငယ်လေးကို အရုပ်ဝယ်ပေးဖို့ ဈေးဆိုင်တဆိုင်ကို ခေါ်သွားတဲ့အခါ သားငယ်လိုချင်တာက ကားတစီးဖြစ်ပြီး၊ အမေ၀ယ်ပေးချင်တာက ရဟတ်ယာဉ်လေး ဆိုပါစို့။ အကျိုးစီးပွားနှစ်ခု မတူညီတဲ့အခါ အပေးအယူ (bargain) လုပ်ပြီး cooperative bargaining ၊ Non-cooperative bargaining နည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုဖို့ လိုလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အမေနဲ့သား ဆက်ဆံရေးက အစပြုပြီး၊ နိုင်ငံတွင်း ပဋိပက္ခတွေမှာ ဘက်နှစ်ဘက် ညှိနှိုင်းတာ၊ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးပြုလုပ်တာတွေအထိ နေရာတိုင်းမှာ strategic games တွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ တချို့ဂိမ်းတွေမှာ ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးက တပြိုင်တည်းလှုပ်ရှားပြီး၊ သူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကလဲ လျှို့ဝှက်ချက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကို ဂိမ်းသီအိုရီ သဘောတရားအရ simultaneous move games (သို့မဟုတ်) static games လို့ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။
တချို့ဂိမ်းတွေမှာကျတော့ ဘက်တဘက်က စတင်လှုပ်ရှားလာပြီးမှ၊ အခြားဘက်တဘက်က တုန့်ပြန်လှုပ်ရှားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- စစ်တုရင်ကစားခြင်း၊ နိုင်ငံတနိုင်ငံကို အခြားနိုင်ငံက ၀င်ရောက်ကျူးကျော်ခြင်း စတာမျိုးတွေပါ။ ဒါကို ဂိမ်းသီအိုရီအရ sequential-move games (သို့မဟုတ်) dynamic games လို့ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
ပုန်းတမ်း၊ ရှာတမ်း ကစားပွဲတွေကတော့ တပြိုင်နက်တည်း လှုပ်ရှားတဲ့ simultaneous move games (သို့မဟုတ်) static games အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူနဲ့ ဥပဒေ ဘက်တော်သားတွေ အကြား၊ သတ်ဖြတ်ခံရဖို့ ခြိမ်းချောက်ခံထားရသူနဲ့ လူသတ်သမားအကြား၊ မြေအောက်ယူဂျီ လှုပ်ရှားသူများနဲ့ အာဏာပိုင်ထောက်လှမ်းရေး များအကြား၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူများနဲ့ သတင်းမုဆိုးများ အကြား၊ နယူးကလီးယား လက်နက် တိတ်တဆိတ်ထုတ်လုပ်နေသူများသူများနဲ့ နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများအကြားနဲ့ စစ်ပွဲများမှာ တဘက်နဲ့တဘက် ရင်ဆိုင်နေရသူများအကြားမှာ ဒီလို ဂိမ်းလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
တခါတရံကျတော့လဲ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ သံတမန်ရေးရာတွေမှာ နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်ထားတဲ့ လက်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ပုန်းနေတဲ့ လက်တွေပါပဲ။ ပုန်းနေတဲ့လက်တွေကို မသိပဲ ကိုယ်ကပဲ လိုက်ရှာနေတဲ့အခါ၊ တပြိုင်တည်းမှာတင် ကိုယ့်ကိုလဲ ရှာသူရှိနေပြီး မုဆိုးကနေ သားကောင် ပြန်ဖြစ်သွားနိုင် ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ သံတမန်ရေးရာတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဂိမ်းတွေရဲ့ အရှုံးအနိုင်တွေ၊ ရလဒ်ကောင်းထွက်ပေါ်မှု စတာတွေဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနိုင်သူများရဲ့ ဦးနှောက်အရည်အသွေးပေါ်မှာ အဓိက မူတည်တယ်လို့ ဆိုစကားရှိကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိန်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ချင်ရင် စိန်အကြောင်း နားလည်ဖို့ လိုအပ်သလိုပဲ ဂိမ်းကစားမယ့်သူတွေဟာလဲ ဂိမ်းတွေရဲ့ အကြောင်းတွေ၊ အခြေခံသဘောတရားတွေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေ၊ ကွက်ကျော်ကြည့်နည်းတွေကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
ပုန်းတမ်း၊ ရှာတမ်း ကစားပွဲရဲ့ အခြေခံသဘောတရားလေးတွေကို ရိုးရှင်းတဲ့ ဥပမာလေးတခုပေးပြီး တင်ပြလို ပါတယ်။ ဖိုးကောင်းလေးနဲ့ ပူစူးမ တို့ဟာ ပိုက်ဆံငါးဆယ် လောင်းကြေးပါတဲ့ ပုန်းတမ်းရှာတမ်း ကစားပွဲတခုကို ကစားကြပါတယ်။ ပူစူးမက အိမ်အတွင်း (သို့မဟုတ်) ပန်းခြံထဲမှာ ပုန်းရမှာဖြစ်ပြီး၊ ဖိုးကောင်းလေးက ပူစူးမကို လိုက်ရှာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လိုက်ရှာတဲ့အခါ အိမ်အတွင်း (သို့မဟုတ်) ပန်းခြံ တခုခုမှာ လိုက်ရှာဖို့ ဖိုးကောင်းလေးက ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ ရှာဖွေချိန် ဆယ်မိနစ် ရပါတယ်။ ဒီဆယ်မိနစ်အတွင်းမှာ ပူစူးမကို ဖိုးကောင်းလေးက ရှာတွေ့ခဲ့ရင် ပိုက်ဆံငါးဆယ်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ ရှာမတွေ့ခဲ့ရင်တော့ ပူစူးမက ပိုက်ဆံ ငါးဆယ် ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီဂိမ်းလေးကို ပူစူးမ ရှုထောင့်ကနေ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။ ပူစူးမက အိမ်ထဲမှာ ပုန်းပြီး၊ ဖိုးကောင်းလေးက အိမ်ထဲမှာ လိုက်ရှာခဲ့ရင် ဒီပွဲမှာ ပူစူးမ ရှုံးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပူစူးမရဲ့ အကျိုးအမြတ်က သုည (၀) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မဟုတ်ပဲ ပူစူးမက ပန်းခြံထဲမှာ ပုန်းပြီး၊ ဖိုးကောင်းလေးက အိမ်ထဲမှာ လိုက်ရှာခဲ့ရင် ဒီဂိမ်းမှာ ပူစူးမ နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အကျိုးအမြတ်က ငါးဆယ် (၅၀) ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ပူစူးမက အိမ်ထဲမှာပုန်းပြီး၊ ဖိုးကောင်းလေးက ပန်းခြံထဲမှာ လိုက်ရှာခဲ့ရင်လဲ ဒီဂိမ်းမှာ ပူစူးမ နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အကျိုးအမြတ်က ငါးဆယ် (၅၀) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ပူစူးမက ပန်းခြံထဲမှာ ပုန်းပြီး၊ ဖိုးကောင်းလေးက ပန်းခြံထဲမှာ လိုက်ရှာခဲ့ရင်တော့ ဒီဂိမ်းမှာ ပူစူးမ ရှုံးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပူစူးမရဲ့ အကျိုးအမြတ်က သုည (၀) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်းလေးကိုပဲ ဖိုးကောင်းလေး ရှုထောင့်ကနေ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။ ပူစူးမက အိမ်ထဲမှာ ပုန်းပြီး၊ ဖိုးကောင်းလေးက အိမ်ထဲမှာ လိုက်ရှာခဲ့ရင် ဒီပွဲမှာ ဖိုးကောင်းလေးက နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖိုးကောင်းလေးရဲ့ အကျိုးအမြတ်က ငါးဆယ် (၅၀) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မဟုတ်ပဲ ပူစူးမက ပန်းခြံထဲမှာ ပုန်းပြီး၊ ဖိုးကောင်းလေးက အိမ်ထဲမှာ လိုက်ရှာခဲ့ရင် ဒီဂိမ်းမှာ ဖိုးကောင်းလေး ရှုံးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အကျိုးအမြတ်က သုည (၀) ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ ပူစူးမက အိမ်ထဲမှာပုန်းပြီး၊ ဖိုးကောင်းလေးက ပန်းခြံထဲမှာ လိုက်ရှာခဲ့ရင်လဲ ဒီဂိမ်းမှာ ဖိုးကောင်းလေး ရှုံးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အကျိုးအမြတ်က သုည (၀) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ပူစူးမက ပန်းခြံထဲမှာ ပုန်းပြီး၊ ဖိုးကောင်းလေးက ပန်းခြံထဲမှာ လိုက်ရှာခဲ့ရင်တော့ ဒီဂိမ်းမှာ ဖိုးကောင်းလေး နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖိုးကောင်းလေးရဲ့ အကျိုးအမြတ်က ငါးဆယ် (၅၀) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကို ခြုံကြည့်ပြီး ဇယားလေး တခု ဆွဲလို့ရပါတယ်။
(၀ ၊ ၅၀)
ဂိမ်းသီအိုရီအရ ဒီလို ဇယားလေးတွေကို pay-off matrix လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒီဥပမာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဂိမ်းက အရမ်းကို ရိုးရှင်းပေမယ့် လက်တွေ့နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ ရာဇ၀တ်မှု နှိမ်နင်းရေး နယ်ပယ်မှာကျတော့ အလွန်ကို ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဂိမ်းတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပြီး၊ တခါတရံမှာ models တွေ၊ pay-off matrix လေးတွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့ ရာနဲ့ချီတဲ့ ဂိမ်းသီအိုရီကျွမ်းကျင်သူများက ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြရတာလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။
ရာဇ၀တ်မှုနှိမ်နင်းရေး၊ စစ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးရာတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဂိမ်းရဲ့ သဘောသဘာဝပေါ် မူတည်ပြီး pay-off matrix ပေါင်းများစွာကို ကြိုတင်ရေးဆွဲ၊ ဆန်းစစ်လေ့လာပြီးမှ အရေးပါတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို စလှမ်းကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးနဲ့ လောင်းကြေးထပ်တာ မဟုတ်ပဲ အသက်တွေ၊ ဘ၀တွေ၊ အနာဂတ် လူ့အဖွဲ့အစည်း တွေကို လောင်းကြေးထပ်တာဆိုရင်တော့ ခြေလှမ်းတိုင်းကို ဂရုပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပုန်းတမ်း၊ ရှာတမ်း ကစားတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်က ပုန်းသူလား၊ ရှာသူလား ဆိုတာ သိဖို့ လိုအပ်သလို၊ တပြိုင်နက်တည်းမှာတင် ရှာသူလဲဖြစ်၊ တခြားရှာသူတွေရဲ့ အန္တရာယ်ကနေ ပုန်းရသူလဲ ဖြစ်တဲ့အခါမျိုး ကြုံလာခဲ့ရင် ပုန်းသင့်တဲ့ အချိန်ပုန်းပြီး၊ ရှာသင့်တဲ့ အချိန် ရှာတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၂၃၊ ၈၊ ၂၀၁၁)
လုံလောက်ပြီ၊ ဆက်ပြီး သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး (ဘာသာပြန် ရသစာစု)
တခါတုန်းက အိမ်တအိမ်မှာ တံခါးနှစ်ချပ်ရှိပါတယ်။ တံခါးတချပ်က အရမ်းလှပတဲ့ ဧည့်ခန်းတံခါးဖြစ်ပြီး၊ နောက်ထပ် တံခါးတချပ်ကတော့ သာမန် ရေချိုးခန်းတံခါး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတံခါးနှစ်ချပ်ဟာ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ မတူညီပေမယ့် ဘ၀တူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအိမ်မှာနေတဲ့ ကလေးတွေဟာ တံခါးတွေကို ဆောင့်ပိတ်လိုက်၊ ကန်ကျောက်လိုက် လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဆိုးသွမ်းကလေးတွေ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီတံခါးနှစ်ချပ်ဟာ ညဘက်လူခြေတိတ်ချိန်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ မသေချာ၊ မရေရာတဲ့ အနာဂတ်ဘ၀တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စကားသဲ့သဲ့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဧည့်ခန်းတံခါးဟာ အစဉ်အမြဲ မောပန်းနွမ်းနယ် စိတ်ပျက်နေပြီး၊ အချိန်မရွေး ဒေါသတွေ ပေါက်ကွဲတော့မယ့် အခြေအနေမှာရှိတတ်ပါတယ်။ ရေချိုးခန်းတံခါးကတော့ အစဉ်အမြဲ သွေးအေးနေလေ့ရှိပြီး၊ ဧည့်ခန်းတံခါးကို နှစ်သိမ့်လေ့ရှိတယ်။
"စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒါဟာ သမရိုးကျ ဖြစ်ရပ်တွေပါ။ သူတို့က ကလေးတွေပဲ ရှိသေးတာကိုး။ နောက်ဆို သူတို့တွေ ဒါမျိုး မလုပ်ရဘူးလို့ သင်ခန်းစာ ရသွားမှာပဲ။ အချိန်လေး နည်းနည်းသာပေးလိုက်။ အခြေအနေတွေ တိုးတက်လာတာကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်" လို့ သူက အမြဲအားပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ရေချိုးခန်းတံခါးက ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါတိုင်း ဧည့်ခန်းတံခါးက သွေးအေးသွားလေ့ရှိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တနေ့တော့ အဲဒီအိမ်မှာ ပါတီပွဲကြီးတခုကျင်းပပြီး၊ တံခါးတွေကို ဆောင့်ဖွင့်လိုက်၊ ဆောင့်ပိတ်လိုက်၊ ကန်ကျောက်လိုက် လုပ်ကြတဲ့အခါမှာ ဧည့်ခန်းတံခါးဟာ ဘယ်လိုမှ ဆက်ပြီး သည်းခံနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပါဘူး။ "တော်ပြီ၊ လုံလောက်ပြီ။ ဆက်ပြီး သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ တယောက်ယောက်က လာပြီးဆောင့်ပိတ်လိုက်တာနဲ့ ကွဲကြေကျိုးပဲ့ ပစ်လိုက်မယ်။ ဒါမှ သူတို့တွေ သိသွားမယ်" လို့ သူက ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။ ရေချိုးခန်းတံခါးက ဘယ်လောက်ပဲ ဖြောင့်ဖြပေမယ့် မရတော့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ နောက်တနေ့မှာ ကလေးတယောက်က ဆောင့်ပိတ်လိုက်တာနဲ့ ဧည့်ခန်းတံခါး ကွဲကြေကျိုးပဲ့သွားပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိမ်ထဲမှာ ပြဿနာတွေတက်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့ သတိပေးခံ လိုက်ရပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ပြီး ဧည့်ခန်းတံခါးက ကျေနပ်သွားပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ လှလှပပ လက်စားချေလိုက်နိုင်ပြီ မဟုတ်လား။
ဒါပေမယ့်လဲ ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာ အိမ်ပိုင်ရှင်တွေဟာ ကွဲကြေကျိုးပဲ့နေတဲ့ တံခါးတချပ် အိမ်မှာ ရှိနေတာကို စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တံခါးကို ပြင်ဆင်ခြင်း မပြုတော့ပဲ အစားထိုးလိုက်ပါတော့တယ်။ ဧည့်ခန်းတံခါးဟောင်းကိုတော့ အမှိုက်ပုံနားမှာ ပစ်ထားလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ သူလုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် အရမ်းလှပတဲ့ ဧည့်ခန်းတံခါးလေးက နောင်တရသွားပါတော့တယ်။ အချိန်အနည်းငယ်လောက် စောင့်သင့်တဲ့ အချိန်မှာ မစောင့်ဆိုင်းမိလို့ ခုဆိုရင် သူဟာ ဖယ်ရှားခြင်း ခံလိုက်ရပါပြီ။ ထယ်ထယ်ဝါ၀ါ လှပသော တံခါးဘ၀ကနေ လွှစာမှုန့်ဘ၀ကို ရောက်သွားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တည်း မှာပဲ သူ့သူငယ်ချင်း သာမန်ရေချိုးခန်းတံခါးလေးကတော့ သူ့နေရာနဲ့သူ ရှိနေပါတယ်။ ကလေးဆိုးတွေက သူ့ကို ဂရုတစိုက်နဲ့ ကိုင်တွယ်လာကြပါတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့ ဧည့်ခန်းတံခါးလေးဟာ လွှစာမှုန့်ဘ၀ကိုတော့ မရောက်သွားရှာပါဘူး။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ တယောက်က တံခါးလေးကို အမှိုက်ပုံတွေနားမှာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီတံခါးဟာ ကွဲကြေကျိုးပဲ့နေတယ် ဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ အိမ်ကလေးအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ သူက တွေးမိသွားပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဧည့်ခန်းတံခါးလေးဟာ တံခါးဘ၀ကို ပြန်ရောက်ခွင့် ရသွားပြီး၊ တံခါးဖြစ်ရခြင်းမှာ စိတ်မသက်သာ စရာတွေ ကြုံတွေ့ရမှာပဲ ဆိုတဲ့ အခြေအနေမှန်ကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ လက်ခံသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်သင့်တဲ့ အချိန်ကို စိတ်ရှည်စွာနဲ့ စောင့်ဆိုင်းရမယ်ဆိုတာကိုလဲ သူနားလည်သွားပါပြီ။
ရေးသားသူ- Pedro Pablo Sacristán
ဘာသာပြန်သူ - ခင်မမမျိုး (၂၂၊ ၈၊ ၂၀၁၁)
(Pedro Pablo Sacristán ရေးသားသော Short Stories by Values စာအုပ်လေးမှ That's enough ဆိုသော စာစုလေးအား မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်)
ဒေါ်မြမေဆိုတဲ့ ကလေးသုံးယောက်အမေ မုဆိုးမကြီးဟာ ….မြို့မှာ အကြော်များကို ဗန်းကလေးထဲ ထည့်ပြီး လိုက်ရောင်းတဲ့ ခေါင်းရွက်ဗျတ်ထိုး ဈေးသည် အမျိုးသမီးကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အကြော်မျိုးစုံ ကြော်လှော်ခြင်းနဲ့ လက်သုပ်စုံလုပ်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်လှပေမယ့် ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ အရင်းအနှီး မရှိပါဘူး။ သူမရဲ့ အိမ်လေးဟာ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် လမ်းဖြစ်တာကြောင့် ဆိုင်လေးဖွင့်ရရင် အောင်မြင်မယ်လို့ သူမမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသိအကျွမ်းများကို အကူအညီတောင်းပေမယ့် ဘ၀တူတွေမို့ ငွေချေးငှားပေးဖို့ မတတ်နိုင်ကြပါဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲက ငွေတိုးချေးစားတဲ့ အိမ်ကို သွားတော့လဲ တရာမှာ ဆယ့်ငါးကျပ်တိုး၊ တရာမှာ နှစ်ဆယ်တိုးတွေ ဖြစ်တာကြောင့် သူမတတ်နိုင်တဲ့ အတိုးနှုန်းထက် ပိုပြီး မြင့်မားနေပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲ နိုင်ငံအများအပြားမှာ ဒေါ်မြမေလိုပဲ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသံသရာကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ အရင်းအနှီးမရှိသူတွေ အများအပြား ရှိနေပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှု အားနည်းတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဘဏ်တွေက ငွေချေးဖို့ ခဲယဉ်းတာကြောင့် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာမှာ ရှိတဲ့ ငွေတိုးချေးစားသူတွေနဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများထဲမှ ချေးငွေ (informal credit) ကို အားကိုးကြရပါတယ်။ ဒီလို အားကိုးရာမှာလဲ အတိုးနှုန်းတွေက မြင့်မားခြင်းနဲ့ မိတ်ဆွေများထံမှ ငွေကို ရေတိုကာလအတိုင်းအတာ တခုအထိသာ ချေးယူနိုင်မှု စတာတွေကြောင့် တပိုင်တနိုင် စီးပွားဖြစ် လုပ်ငန်းဆောင်တာလေးတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိကြပါဘူး။ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြံဥာဏ်တွေ၊ ဗဟုသုတတွေလဲ ရဖို့ ခဲယဉ်းကြပါတယ်။
ဒီလို အခြေအနေတွေ ကြုံနေရသူတွေအတွက် ထွက်ပေါက်လိုပါတယ်။ ဒီထွက်ပေါက်ကတော့ microfinance ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Micro ဆိုတာကို "သေးငယ်သော" လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလေ့ရှိကြပြီး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးရှူထောင့်ကနေ ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါ သေးငယ်သော စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်သော ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးသမားများ၊ ၀င်ငွေနည်းပါးသော လူထုလူတန်းစားများ စတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပါတယ်။ Finance (ဘဏ္ဍာရေး) ဆိုရာမှာလဲ စီးပွားရေးချေးငွေများ၊ ပညာရေးချေးငွေများ၊ စုဆောင်းငွေများနဲ့ အသေးစာအာမခံ လုပ်ငန်းများ စတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပါတယ်။
Microfinance ဆိုတာမှာ ဒီလိုတိုက်ရိုက်ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ဆောင်မှုတွေအပြင် စီးပွားရေးအကြံဥာဏ်နှင့် အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုတွေ၊ ငွေစာရင်းရေးဆွဲမှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းတွေ၊ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ပညာပေးမှုတွေ၊ အစားအစာနှင့် အာဟာရသန့်ရှင်းရေး လမ်းညွှန်ဆွေးနွေးမှုတွေစတဲ့ ဘဏ္ဍာရေး မဟုတ်သော ၀န်ဆောင်မှုများပါ ဆက်နွယ် ပတ်သက်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် Mircrofinance ဆိုတာကို သမရိုးကျ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကို ခံစားခွင့်မရရှိသူများအား ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမဟုတ်သော အခြားဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွေ ရှိပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် မူကွဲတွေ အမျိုးမျိုးရှိပေမယ့် ၀န်ဆောင်မှုတွေဟာ ၀န်ဆောင်မှုပေးအပ်ရမယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်ကိုတော့ လူအများက လက်ခံထားကြပါတယ်။
Microfinance ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးဖို့အတွက် လူမှုရေးအမြင်နဲ့ ရည်မှန်းချက်များရှိတဲ့ အန်ဂျီအိုတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဘဏ်တွေ စတဲ့ Microfinance Institutions (MFIs) တွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အချို့နိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက microfinance ၀န်ဆောင်မှုတွေ ပေးအပ်လာကြတာ ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒီလို လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ နိုင်ငံရေးအမြင်၊ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်၊ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ ရောထွေးသွား စေနိုင်တဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆက်စပ်မှုတွေ၊ ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက် ရမှုတွေ ရှိနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် သွင်ပြင်လက္ခဏာနဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ မတူညီတဲ့အတွက် သီးခြား အဖွဲ့အစည်း တွေအနေနဲ့ ရပ်တည်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
Microfinance Institutions (MFIs) တွေမှာ အခြား နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အင်စတီကျူးရှင်းတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ ရှိပါတယ်။ MFI တွေဟာ informal credit ကို အစားထိုးပြီး ချေးငွေနဲ့ အခြား ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးကြရပါတယ်။ ဒီလို ပေးအပ်ရမှာ ပေါင်နှံစရာပစ္စည်း လိုအပ်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ချေးငွေရယူမှု လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေက ရိုးရှင်းပြီး၊ စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက်ဖြည့်စွက်ရမှုများက သမရိုးကျဘဏ်တွေထက် ပိုပြီး လျော့နည်းပါတယ်။
များသောအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အလိုက်၊ ကျေးရွာအလိုက် solidarity groups များ စုဖွဲ့စေပြီး၊ အုပ်စုရဲ့ လူမှုအာမခံ (social insurance) ပေါ်မှာမူတည်ပြီး ချေးငွေ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ချေးငွေ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမှု အနေအထားကလဲ တဦးချင်းလိုအပ်ချက်နဲ့ အညီသတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးအမြတ် ရယူရေး ရည်မှန်းချက်နဲ့ လုပ်ကိုင်တာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးရဲ့ ဒဏ်ကို အဆိုးရွားဆုံး ခံစားနေကြရတဲ့ အခြေခံ လူထုလူတန်းစားများကို အဓိကထားပြီး ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ အင်စတီကျူးရှင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Microfinance institutions များရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ အမြတ်ကြီးစား ငွေတိုးချေးစားသူတွေရဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအပေါ် အနိုင်ကျင့်အခွင့်ကောင်းယူနေမှုများကို ရပ်တန့်ရန်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို အကုန် အကျ အနည်းဆုံး၊ သင့်လျော်သော အတိုးနှုန်းတွေနဲ့ ချေးငွေများ ရရှိစေရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးရန်၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းစေသော ထင်သာမြင်သာသည့် ပရိုဂျက်များကို ဘဏ္ဍာရေး ထောက်ကူပေးရန်၊ အိမ်ထောင်စုများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်မှုတွင် ၀င်ငွေက အရေးပါသည်ဖြစ်ရာ အမျိုးသမီးများ၏ ၀င်ငွေ အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်များပြားလာခြင်းဖြင့် ကျားမတန်းတူညီမျှမှု ရရှိလာစေရန်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ဖန်တီးပေးရန်၊ တပိုင်တနိုင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးများမှ အိမ်ထောင်စုအတွက် လိုအပ်မျှတသော ၀င်ငွေများ ရရှိလာစေရန် နှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာစေရန် စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရည်မှန်းချက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
Microfinance ကို development tool တခုအနေနဲ့ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိကြောင်း ပညာရှင်များက လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ကျေးရွာ အချို့မှာ Microfinance အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ရရှိလာတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို ပညာရှင် Khandker ဆိုသူက လေ့လာခဲ့ကြရမှာ ငါးနှစ်အတွင်းမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုရာခိုင်နှုန်း ငါးရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအကြား ကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ပညာရှင် Marguerite Robinson ဆိုသူက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်းအားဖြင့် အိမ်ထောင်စုများ၏ ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်း တိုးတက်မှု ရှိလာခြင်း၊ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း မြင့်မားလာခြင်း၊ သေးငယ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ချဲ့ထွင်လာနိုင်ခြင်း၊ ၀င်ငွေတိုးပွား လာခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိနိုင်တာကြောင့် Microfinance ဟာလဲ အခြား စက်မှုတော်လှန်ရေး (Industrial Revolution) နဲ့ အိုင်တီတော်လှန်ရေး (IT Revolution) စတာတွေလိုပဲ လူ့အဖွဲ့အစည်း တိုးတက်ရေးအတွက် ပေါ်ထွက်လာတဲ့ တော်လှန်ရေးတရပ်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ယူကေနိုင်ငံ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလေ့လာမှုသိပ္ပံမှ ပညာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ Neil McCulloch နဲ့ Baulch တို့ရဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွေအရ ၀င်ငွေအတက်အကျဖြစ်မှု (income fluctuations) ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့် ရေတိုကာလမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို လျော့ကျစေနိုင်တဲ့အတွက် Microfinance ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ ရေရှည်ကာလမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ကျစေရေးအတွက် လူသားအရင်းအမြစ် (Human capital) ပေါ်ထွက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
အာဖရိကတိုက်၊ ဇင်ဘာတွေနိုင်ငံမှာ Microfinance အသုံးပြုမှုကို လေ့လာခဲ့ကြတဲ့ Carolyn Barnes နဲ့ Erica Keogh ဆိုသူတို့ကလဲ Microfinance ကို အသုံးပြုသူများရဲ့ လစဉ်ဝင်ငွေဟာ အသုံးမပြုသူများရဲ့ လစဉ်ဝင်ငွေထက် နှစ်ဆခန့် ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ လက်တင်အမေရိကတိုက်၊ ပီရူးနိုင်ငံမှာ Microfinance အသုံးပြုမှုကို လေ့လာခဲ့တဲ့ Elizabeth Dunn ဆိုသူကလဲ Microfinance ကို အသုံးပြုသူများရဲ့ လစဉ်ဝင်ငွေဟာလဲ အသုံးမပြုသူများရဲ့ လစဉ်ဝင်ငွေထက် ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားပြီး၊ Below the poverty line မှာ Microfinance အသုံးပြုသူ နှစ်ဆယ့်ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီး၊ အသုံးမပြုသူ လေးဆယ့် တစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
စုဆောင်းရေးက ပထမ လား၊ အကြွေးက ပထမ လား (Savings First Vs Credit First)
(၁၉၅၀) ကာလတွေမှာတုန်းက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် စုဆောင်းငွေရှိရေးက အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ savings mobilization တွေ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၈၀) နှောင်းပိုင်း ကာလတွေရောက်တော့ အကြွေးက အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆသစ်တွေ ခေတ်စားလာခဲ့ပြီး၊ အသုံးပြု ဖော်ဆောင်သူတွေနဲ့ လေ့လာသူတွေအကြား အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာစွာ အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိလာခဲ့ကြပြီး၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ နည်းလမ်းနှစ်ခုစလုံးမှာ သက်ဆိုင်ရာ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ခံလာကြတာနဲ့အမျှ နှစ်မျိုးစလုံးကို အသုံးပြုတဲ့ အင်စတီကျူးရှင်းတွေ ပါ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
စုဆောင်းရေးကို ပထမဦးစားပေးခြင်းအားဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိခြင်း၊ အကြွေးကဲ့သို့ ပြန်လည် ပေးဆပ်ရမည့် ရက်များ သတ်မှတ်ချက် မရှိခြင်း၊ စုဆောင်းသူများနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများ အကြားတွင် ငွေစုသူများ အနေဖြင့် စတင်ခြင်း၊ စုဆောင်းမှုများမှ အတိုးများ ရရှိခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အကြွေးကို ပထမဦးစားပေးခြင်းအားဖြင့် အလှူငွေများရယူကာ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများ စတင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ အများပြည်သူအကြားသို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်း၊ ၀န်ဆောင်မှု များအား ချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ transaction costs ကြီးမြင့်မှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ အားနည်းချက်တွေလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတိုင်းဟာ ဒင်္ဂါးပြားတစေ့ရဲ့ ခေါင်းနဲ့ ပန်းလိုပါပဲ။ အားနည်းချက်တွေ ရှိသလို အားသာချက်တွေလဲ ဒွန်တွဲ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ စုဆောင်းရေးကို ပထမဦးစားပေးခြင်းအားဖြင့် ၀င်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသော middle income စီးပွားရေးသမား များကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေထက် ပိုပြီး အကျိုးကျေးဇူးရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ကနဦးအနေနဲ့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်မှု၊ ပါဝင်သူများကို ပညာပေးမှု၊ ပဏာမ စုဆောင်းငွေရှိလာစေရန် အချိန်အတိုင်းအတာ တခုယူရမှု စတာတွေကြောင့် တည်ထောင်ဖို့ ပြင်ဆင်ရတဲ့ အချိန်ကာလကလဲ ပိုပြီး ကြာနိုင်ပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ စုဆောင်းငွေများကို စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုဆောင်းငွေလုံခြုံရေး၊ အလွဲသုံးစားမှု၊ voting inequities စတဲ့ ပြဿနာတွေ တက်နိုင်ပါတယ်။ စုဆောင်းငွေများကို လွှဲပြောင်းမှု၊ လိုက်လံ သိမ်းယူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေလဲ များပါတယ်။
အကြွေးကို ပထမဦးစားပေးခြင်းအားဖြင့် အလှူငွေ (donor funding) များ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကျိုးအမြတ် (Investment funding) များကို တည်မှီလုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ ထုတ်ချေးရန် ချေးငွေများ အလုံအလောက်မရှိမှုနဲ့ ငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှု ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်အကူအညီပေးမှု၊ empower လုပ်ပေးမှု၊ ပညာပေးသင်တန်းများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပေးမှု စတာတွေမှာ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားက ထိန်းချုပ်မှုတွေ ပြုလုပ်လာတာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရရင် Microfinance ဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော Development tool တခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အခြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာသင်ကြားမှု အခွင့်အလမ်းများ တိုးမြှင့်ခြင်း၊ လူမှုအရင်းအနှီး (social capital) များပြားခြင်း၊ လူမှုဝန်ဆောင်မှု (social services) များဆောင်ရွက်ခြင်း စတာတွေနဲ့ တပြိုင်တည်း ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများကို တိုက်ဖျက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၂၁၊ ၈၊ ၂၀၁၁)
Human Migration ဆိုတာ ယနေ့ကမ္ဘာမှာ အရေးပါတဲ့ သဘောတရား တရပ်ဖြစ်ပေမယ့်၊ ရှေးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ပေါ်ပေါက်နေခဲ့ပါတယ်။ ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ဘ၀အခြေအနေအတွက် လူအများဟာ မွေးရပ်မြေ၊ အိမ်ယာတွေကို ခွဲခွာပြီး အခြားမြို့ရွာ၊ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်သွားရောက် လုပ်ကိုင်တာတွေ၊ အခြေချနေထိုင်တာတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းကာလရောက်တော့ ဂလိုဘယ်လိုင်းဇေးရှင်း အရှိန်အဟုန် မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ အာရှ၊ အာဖရိက၊ တောင်အမေရိကနဲ့ အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများကနေ အနောက်ဥရောပ၊ သြစတြေးလျနဲ့ မြောက်အမေရိကနိုင်ငံများဆီကို migration လုပ်မှုတွေ များပြားလာပါတယ်။ ဒေသတွင်းမှာတင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ နိုင်ငံတွေကနေ အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို migration လုပ်မှုတွေလဲ များပြားလာပါတယ်။ တရားဝင် ပြုလုပ်မှုတွေ ရှိသလို၊ တရားမ၀င် ပြုလုပ်တာတွေလဲ ရှိလာပါတယ်။ ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး၊ smuggling of migrants ဆိုတဲ့ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုတွေကို ကျူးလွန်လာမှုတွေလဲ ရှိပါတယ်။
Smuggling of Migrants ဆိုရာဝယ်
(၂၀၀၀) ခုနှစ်မှာ The United Nations Convention against Transnational Organized Crime ကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံရဲ့ Resolution 55/25 အဖြစ် ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကွန်ဗင်းရှင်းကို နောက်ထပ် ပရိုတိုကောလ် သုံးခုနဲ့ ထပ်ဆင့်ဖြည့်စွက်ပြီး၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇ၀တ်မှု (Transnational Organized Crime) တိုက်ဖျက်ရေးကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီပရိုတိုကောလ်သုံးခုကတော့ the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children; the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air; and the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air ရဲ့ ပုဒ်မ (၃) နဲ့ ပုဒ်မ (၆)မှာ smuggling of migrants ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နဲ့ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု မြောက်စေတဲ့ အပြုအမူတွေကို ရှင်းလင်းစွာ ထည့်သွင်းဖော်ပြ ထားပါတယ်။ Smuggling of migrants ဆိုတာ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသား မဟုတ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကို အဲဒီနိုင်ငံမှာ အခြေချနေထိုင်လို့ရအောင် ငွေကြေး (သို့မဟုတ်) အခြား တစုံတရာ အကျိုးအမြတ်များအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ ရယူပြီး အကူအညီပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဒ်မ (၆) အရ တိုင်းပြည်တခုအတွင်းသို့ ခိုးသွင်းခြင်း၊ အဆိုပါ ခိုးသွင်းခံရသူသည် ခိုးသွင်းခံရသော တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) တိုင်းပြည်တွင်းတွင် တရားဝင် နေထိုင်နိုင်ခွင့် မရှိခြင်းနှင့် ယင်းသို့ခိုးသွင်းရာတွင် ငွေကြေး (သို့မဟုတ်) အခြား တစုံတရာ အကျိုးအမြတ်များအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ ရယူခြင်းဟာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု မြောက်ပါတယ်။
အလားတူပဲ တိုင်းပြည်တခုအတွင်းမှာ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်းကုန်လွန်နေသူ (သို့မဟုတ်) တရားမ၀င် ၀င်ရောက် နေထိုင်နေသူ တယောက်ကို အဆိုပါ တိုင်းပြည်တွင်းမှာ တရားမ၀င် ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့် ရရှိအောင် (သို့မဟုတ်) ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဘောင်ဝင်အောင် လိမ်လည် ကူညီပေးခြင်းနှင့် ယင်းသို့ပြုလုပ်ရာတွင် ငွေကြေး (သို့မဟုတ်) အခြား တစုံတရာ အကျိုးအမြတ်များအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ ရယူခြင်းဟာလဲ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု မြောက်ပါတယ်။
The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air ဟာ migrants များကို အရေးယူဆောင်ရွက်ရတဲ့ legal instrument တခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တခါတရံမှာ migrants တွေက ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရန် ကြိုးပမ်းနေသူများရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံသို့ ခိုးသွင်းပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်း ကျော်လွန်နေသော နိုင်ငံ (သို့) တရားမ၀င် ၀င်ရောက်နေသော နိုင်ငံတခုမှာ တရားမ၀င် ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့် ရရှိအောင် (သို့မဟုတ်) ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဘောင်ဝင်အောင် လိမ်လည် ကူညီပေးမည်လို့ ဆိုပြီး ငွေကြေး (သို့မဟုတ်) အခြားတစုံတရာအကျိုးအမြတ်များကို ရယူတောင်းဆိုမှု လုပ်ဆောင်လာပြီဆိုရင် ဒါဟာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု ကျူးလွန်ရန် ကြံစည်အားထုတ်နေသူများရဲ့ ချဉ်းကပ်မှုဆိုတာကို လူအများနားလည်မှသာ ရာဇ၀တ် ပြစ်မှုတွေရဲ့ သားကောင်တွေဘ၀က လွတ်မြောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Smuggling of migrants ဟာ လူကုန်ကူးမှုနဲ့ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။
လူကုန်ကူးမှု (Human Trafficking (or) Trafficking in Persons)
The Trafficking in Persons Protocol ရဲ့ အပိုဒ် (၃)၊ အပိုဒ်ခွဲ (က) အရ လူကုန်ကူးမှုဆိုတာကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားရမှာ အပိုင်း (၃) ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။ ပထမတပိုင်းကတော့ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြုမူဆောင်ရွက်ရာမှာ လူကုန်ကူးမှု၏ သားကောင်ဖြစ်နိုင်သူများကို ရှာဖွေခေါ်ယူခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ လက်ခံခြင်း (သို့မဟုတ်) ၀ယ်ယူခြင်း စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒုတိယအပိုင်းကတော့ နည်းလမ်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကုန်ကူးရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့ ဆွဲဆောင် သိမ်းသွင်းခြင်း၊ စည်းရုံးခြင်း၊ အင်အားသုံးခြင်း၊ ခြိမ်းချောက်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်း၊ အာဏာကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ သားကောင်ဖြစ်သူရဲ့ တစုံတရာ အားနည်းချက်ကို အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ငွေ (သို့) အခြား တစုံတရာ အကျိုးအမြတ်များကို ပေးအပ်ပြီး၊ သားကောင်ဖြစ်သူ၏ consent ကို ရယူထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
တတိယအပိုင်းကတော့ ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ လူကုန်ကူးမှုရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေထဲမှာ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ရောင်းချရန်၊ လူတဦးတယောက်(သို့မဟုတ်) လူအစုအဖွဲ့ တခုရဲ့ လိင်ကျေးကျွန်အဖြစ် အသုံးပြုရန်၊ ထိုက်တန်သော လစာနှင့် ခံစားခွင့် မရှိသော အလုပ်များကို စေခိုင်းရန်၊ ကျေးကျွန် (သို့မဟုတ်) ကျေးကျွန်နှင့် အလားသဏ္ဍာန်တူသော အခြေအနေများသို့ သွတ်သွင်းရန် နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာ- ကျောက်ကပ်၊ အသည်း၊ နှလုံး စသည်များ) အား ရယူရန် စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီလို ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက် လူကုန်ကူးမှုကျူးလွန်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်သူများက နည်းမျိုးစုံ အသုံးပြုပြီး၊ ဒါတွေဟာ သားကောင်ဖြစ်သူရဲ့ သဘောတူညီချက်အရ ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ခုခံကာကွယ်မှုကို လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို သဘောတူညီချက်ဆိုရာမှာ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက် ဆွဲဆောင် သိမ်းသွင်းခြင်း၊ စည်းရုံးခြင်း၊ အင်အားသုံးခြင်း၊ ခြိမ်းချောက်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်း၊ အာဏာကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ သားကောင်ဖြစ်သူရဲ့ တစုံတရာ အားနည်းချက်ကို အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ငွေ (သို့) အခြား တစုံတရာ အကျိုးအမြတ်များကို ပေးအပ်ပြီး၊ သားကောင်ဖြစ်သူ၏ consent ကို ရယူထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း စတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုထားမယ်ဆိုရင် ဒီသဘောတူညီချက်တွေက အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်ပါတယ်။
Smuggling of migrants နဲ့ လူကုန်ကူးမှုဟာ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ အဓိကကတော့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Smuggling of migrants က ငွေကြေး (သို့မဟုတ်) တစုံတရာ အကျိုးအမြတ်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ လူကုန်ကူးမှု ကျတော့ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ရောင်းချရန်၊ လူတဦးတယောက်(သို့မဟုတ်) လူအစုအဖွဲ့ တခုရဲ့ လိင်ကျေးကျွန်အဖြစ် အသုံးပြုရန်၊ ထိုက်တန်သော လစာနှင့် ခံစားခွင့် မရှိသော အလုပ်များကို စေခိုင်းရန်၊ ကျေးကျွန် (သို့မဟုတ်) ကျေးကျွန်နှင့် အလားသဏ္ဍာန်တူသော အခြေအနေများသို့ သွတ်သွင်းရန် နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာ- ကျောက်ကပ်၊ အသည်း၊ နှလုံး စသည်များ) အား ရယူရန် စတဲ့ အသုံးချမှုအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ကွဲပြားခြားနားမှု တခုကတော့ တိုင်းပြည်တခုအတွင်းသို့ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်မှု (သို့မဟုတ်) တရားမ၀င် နေထိုင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ smuggling of migrants မှာက တိုင်းပြည်တခုကနေ အခြားတိုင်းပြည်တခုအတွင်းကို တရားမ၀င် ခိုးသွင်းမှု (သို့မဟုတ်) တရားမ၀င် နေထိုင်နေသူများအား သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဥပဒေနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ အရ ဘောင်ဝင်သွားအောင် ငွေကြေးရယူ ကူညီပေးမှု စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ လူကုန်ကူးမှုမှာကျတော့ တရားဝင် ၀င်ရောက်မှု (သို့မဟုတ်) တရားဝင်နေထိုင်မှု တွေပါ အကျုံးဝင်သလို၊ တိုင်းပြည်တခုအတွင်းမှာတင် တနေရာမှ အခြားတနေရာသို့ ပို့ဆောင်အသုံးချမှုတွေလဲ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ကွဲပြားခြားနားမှု တခုကတော့ သားကောင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ Smuggling of migrants မှာ သားကောင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ လိုက်လိုက်လျောလျော သဘောတူညီချက် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ smuggling of migrants ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်သူအချို့က သားကောင်ရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားပါဝင်ပြီး၊ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိစေတာကြောင့် ဒါဟာ ပြစ်မှုမမြောက်ဘူးလို့ ထင်မှတ်မှားနေတတ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအရ ဒါဟာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ လူကုန်ကူးမှုမှာကျတော့ သားကောင်ရဲ့ သဘောတူညီချက် ပါဝင်ရင်တောင် အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ရယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကုန်ကူးမှုနဲ့ smuggling of migrants တို့အကြားမှာ အခုလို ကွဲပြားခြားနားချက်တွေ ရှိပေမယ့် ဆက်စပ်မှုတွေလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ အချို့ သားကောင်တွေဟာ အခြားတိုင်းပြည်ကို ခိုးဝင်ဖို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ငွေပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့်၊ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံကို ရောက်သွားချိန်မှာ ရောင်းစားခံရတာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ လူကုန်ကူးမှု ကျူးလွန်သူများက smuggling လုပ်ပေးနေသူများအနေနဲ့ ဟန်ဆောင်အသွင်ယူထားခြင်းတွေ ရှိသလို၊ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများ အချင်းအချင်း အစကနဦး ကတည်းက ချိတ်ဆက်ထားမှုတွေလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ လမ်းကြောင်းတကြောင်းထဲမှာ smuggling လုပ်ခံရသူများနဲ့ လူကုန်ကူးခံရသူများ အတူတွဲပြီး ပါဝင်နေတတ်ပြီး၊ ပြစ်မှူကျူးလွန်နေသူများဟာ လူကုန်ကူးမှုနဲ့ smuggling of migrants နှစ်မျိုးလုံးကို ကျူးလွန်နေတဲ့ ကွင်းဆက်တရားခံများ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
Smuggling of migrants ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှု သဏ္ဍာန်များ
migrants တွေကို အခြားနိုင်ငံတွင်းသို့ ခိုးသွင်းရာမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုသဏ္ဍာန်တွေ မတူညီပါဘူး။ ပထမ တမျိုးကတော့ အရေးပေါ် ခိုးသွင်းပေးမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဏ္ဍာန်မှာ migrants တွေကို နိုင်ငံ (အေ) ကနေ နိုင်ငံ (ဘီ) ကို ခိုးသွင်းဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ organized trip မပါဝင်ပါဘူး။ သူတို့တတွေဟာ နိုင်ငံ (အေ) အတွင်းမှာ တရားဝင် လှုပ်ရှားသွားလာပြီးမှ၊ နိုင်ငံ (ဘီ) နဲ့ အနီးဆုံး နယ်စပ်ကို ရောက်ရှိသွားကြပါတယ်။ အဲဒီကနေ ဒေသခံတွေကို ငွေပေးပြီး၊ တရားမ၀င် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရေးအတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီရာဇ၀တ်မှုမှာ လူတဦး တယောက် (သို့မဟုတ်) လူတစုကို အခြားနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားမ၀င် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်သွားနိုင်ရေးအတွက် ငွေကြေးရယူပြီး ဆောင်ရွက်ပေးသူများဟာ လူတဦးတယောက်၊ တဖွဲ့တည်းတင် မကပဲ လူများစွာ၊ အဖွဲ့များစွာ အဆင့်ဆင့် ပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် သဏ္ဍာန်တမျိုးကတော့ စာရွက်စာတမ်း အတုများ အသုံးပြုမှု ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ (အေ) ကနေ နိုင်ငံ (ဘီ) ကို migrants တွေ ခိုးသွင်းရန် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံ (ဘီ) အတွင်းသို့ တရားမ၀င် ရောက်နေသူများ နိုင်ငံတွင်းတွင် ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်ရန် အတွက် နိုင်ငံ (အေ) မှာ နေထိုင်သူကဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံ (ဘီ) မှာ နေထိုင်သူက ဖြစ်စေ စာရွက်စာတမ်း အတုများ ပြုလုပ်ပေးမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာဇ၀တ်မှုမှာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အတုများ၊ ဗွီဇာအတုများ နဲ့ အခြားဆက်စပ် စာရွက်စာတမ်း အတုများ ပြုလုပ်ပြီး ခိုးသွင်းမှု (သို့မဟုတ်) ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းပေးမှု တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
စာရွက်စာတမ်း အတုများ ပြုလုပ်ပေးမှုမှာ အတုအယောင် လက်ထပ်ခြင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်များအဖြစ် လိမ်လည်ခံယူရန် ငွေကြေးများ ရယူဆောင်ရွက်ပေးမှု စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်း အတုများဆိုရာမှာ ပတ်စ်ပို့အတုများ၊ ပတ်စ်ပို့ ဓာတ်ပုံများခွာယူ၍ အသစ်ပြန်ကပ်မှုများ၊ ခိုးယူထားသော ပတ်စ်ပို့များတွင် အချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ထည့်သွင်းမှုများ၊ နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည် မခံယူခင် ပတ်စ်ပို့များအား ဖျက်ဆီးလွှင့်ပစ်ရန် အကြံပေးချက်များ၊ ဖျောက်ဖျက်ပေးမှုများ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ရာဇ၀တ်မှု သဏ္ဍာန်တမျိုးကတော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုများ ပါဝင်သော stage- to – stage smuggling ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဏ္ဍာန်မှာ နိုင်ငံ (အေ) ကနေ နိုင်ငံ (ဘီ) (လမ်းခရီးတွင် အခြားနိုင်ငံများတွင်လည်း transit လုပ်ရမှုများ ရှိနိုင်သည်) သို့ ခိုးဝင်ရမယ့် သူများဟာ လမ်းခရီးအတွက် ကိုယ်တိုင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် မလိုအပ်ပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် stage co-ordinators များ ရှိပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ ကွန်ယက်သဏ္ဍာန် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ တခါတရံမှာလဲ တဖွဲ့တည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ- နိုင်ငံ (အေ) ကနေ လူတယောက်ကို နိုင်ငံ (စီ)ကို ပို့ပေးသူက တယောက်၊ နိုင်ငံ (စီ) မှာ ခေတ္တ ၀ှက်ထားပေးပြီး၊ နိုင်ငံ (ဒီ) သို့ သွားရမည့် အိုင်ဒီ အတု စီစဉ်ပေးသူက တယောက်၊ နိုင်ငံ (ဒီ) ရောက်ချိန်တွင် အခြား အိုင်ဒီ အတုများ ထပ်မံစီမံပြီးမှ နိုင်ငံ (ဘီ) သို့ ပို့ဆောင်ပေးသူများက တယောက်၊ နိုင်ငံ (ဘီ) သို့ ရောက်ချိန်တွင် ကြိုဆို လက်ခံထားသူက တယောက်၊ နိုင်ငံ (ဘီ)တွင် အိုင်ဒီအတုများ ဖျောက်ဖျက်ပေးပြီး၊ တရားဝင် နေထိုင်ခွင့် ရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသူများက တယောက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလူတွေ အားလုံးဟာ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့တခုတည်းအနေနှင့်ဖြစ်စေ stage- to- stage smuggling process ကြီး တခုလုံးမှာ ပါဝင်ပြီး ရာဇ၀တ်မှု ကျုးလွန်ကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။
smuggling process တွင် ပါဝင်သူများ
smuggling process မှာ အော်ပရေးရှင်းတခုလုံး (သို့မဟုတ်) အဆင့်တဆင့်ကို ကြိုးကိုင်စီမံကြတဲ့ co-ordinators တွေ ရှိပါတယ်။ co-ordinators တွေမှာ အဆက်အသွယ်များစွာ ရှိပြီး၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၊ နေရာချထားရေး အစီအမံ၊ လမ်းကြောင်း စတာတွေအားလုံးကို တာဝန်ယူကြီးကြပ်စီမံလေ့ရှိကြပါတယ်။ co-ordinators တွေဟာ နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်စီမံလေ့ရှိကြတဲ့အတွက် သူတို့ကို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်သေအထောက်အထားများ ရယူရန် ခဲယဉ်းတာကြောင့် co-ordinators များကို ပစ်မှတ်ထားပြီး စုံစမ်းသူများဟာ covert နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြု လေ့ရှိကြပါတယ်။
နောက်ထပ် တမျိုးကတော့ recruiters တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တတွေက smuggling လုပ်မယ့်သူတွေနဲ့ migrants တွေ အကြားမှာ ဆက်သွယ်ပေးရသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ migrants များနဲ့ recruiters တွေဟာ လူမျိုးတူတွေ ဖြစ်တာများပြီး၊ တခါတရံ အိမ်နီးချင်းတွေ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တရားမ၀င် ခိုးသွင်းမှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ recruiters တွေဟာ မိခင်နိုင်ငံတွေမှာ အခြေချနေထိုင်သူများ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး၊ ရံဖန်ရံခါမှာတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ အလည်အပတ် ပြန်လာသူများလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Recruiters တွေဟာ မိခင်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်သူများထဲမှ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ တရားဝင် သွားရောက်ရန် ခက်ခဲနေသူများကို သတင်းအချက်အလက် မှားများပေးခြင်း၊ မက်လုံးများပေးခြင်း (နိုင်ငံဘီတွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ပါက ဘယ်နှစ်နှစ် အတွင်း ချမ်းသာမည် စသည်များ)ဖြင့် သွားရောက်နိုင်ရန် ကူညီပေးမည်ဆိုကာ smuggling process ထဲသို့ သွတ်သွင်းတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်း တရားမ၀င်နေထိုင်မှုမှာလဲ recruiters တွေဟာ လူမျိုးတူတွေ ဖြစ်တာများပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ စိမ့်ဝင်နေတတ်ပါတယ်။ တရားမ၀င်နေထိုင်သူများ၊ တရားဝင်နေထိုင်ရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသူများကို ပစ်မှတ်ထားပြီး စည်းရုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီကနေတဆင့် migrants smuggling လုပ်နေသူများနဲ့ ထပ်မံဆက်သွယ်ပေးကြပါတယ်။
နောက်ထပ်တမျိုးကတော့ လမ်းခရီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာ အဆင်ပြေဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ transporters တွေနဲ့ လမ်းပြတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းခရီးအဆင့်ဆင့်မှာ လမ်းပြတယောက် (သို့မဟုတ်) တစု ရဲ့ လက်ထဲကနေ အခြား လမ်းပြတွေရဲ့ လက်ထဲကို ထပ်မံလွှဲပြောင်းပေးမှုတွေလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကားမောင်းသမားတွေ၊ လမ်းပြတွေ (သို့မဟုတ်) လေယာဉ်နဲ့ လူအများကို ဦးစီးခေါ်ဆောင်သူတွေဟာ smuggling operation ကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်နိုင်သလို၊ ကန်ထရိုက် အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်သူများလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်တမျိုးကတော့ အခြေအနေကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့ spotters တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ၊ စစ်တပ်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး တို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု အခြေအနေကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးရပြီး၊ လှုပ်ရှားလို့ ရနိုင်မယ့် အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါတွေကို မီးစိမ်းပြပေးရသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တမျိုးကတော့ လာဘ်စားသော ပြည်သူ့ ၀န်ထမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ စစ်မှုထမ်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး စသူများက လာဘ်စားပြီး၊ smuggling operation တွေကို မသိချင်ယောင်ပြီး လွှတ်ပေးတာတွေ ရှိပါတယ်။
နောက်တမျိုးကတော့ smuggling process အဆင့်ဆင့်မှာ တည်းခိုနေထိုင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းနဲ့ လူနေအိမ် စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလို ရာဇ၀တ်မှုတွေမှာ တည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်တွေပါ ပါဝင်ပတ်သက် နေတဲ့အခါ စုံစမ်းအရေးယူသူများအတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်တမျိုးကတော့ smuggling process အောင်မြင်သွားစေရန်အတွက် ငွေကြေးရယူပြီး သတင်းထိန်ချန်ထားသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားလက်မှတ်နဲ့ ရထားလက်မှတ် ရောင်းသူများ၊ တက္ကဆီကားမောင်းသူများ၊ လေကြောင်းဝန်ထမ်းများ၊ လှေပိုင်ရှင်များနှင့် လှေသားများ၊ ကားစက်ပြင်များ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တမျိုးကတော့ ရာဇ၀တ်မှုများကနေ ရလာတဲ့ ငွေမည်းတွေကို ငွေဖြူဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရာမှာ ကူညီလုပ်ဆောင် ပေးသူများ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို active role မှာ ပါဝင်သူတွေအပြင် passive role မှာ ပါဝင်နေသူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ- တက္ကဆီမောင်းသမား တယောက်ဟာ လူအုပ်စုကို မြင်ချိန်မှာ illegal immigrants တွေမှန်း သိမြင်ပေမယ့်၊ safe house ကို လိုက်လံ ပို့ဆောင်ပေးပြီး ပုံမှန်ကြေးပဲ တောင်းယူခဲ့ပေမယ့်၊ သက်ဆိုင်ရာကို သတင်းအချက်အလက် ပေးပို့မှု မရှိပဲ blind eye လုပ်ခဲ့ရင် ဒါဟာလဲ passive role မှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
smuggling of migrants ဆိုတဲ့ ရာဇ၀တ်မှု ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေဟာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု စတာတွေကနေ ရုန်းထွက်ဖို့အတွက် ဘ၀အခြေအနေ ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်မယ့် တိုင်းပြည်တွေကို migration လုပ်မှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေတွေကို ငွေကြေး (သို့မဟုတ်) အခြားတစုံတရာ အကျိုးအမြတ် အတွက် အခွင့်ကောင်းယူပြီးဖြစ်စေ၊ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လို့ ထင်မြင်၍ ဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်ကြရာကနေ smuggling operations တွေမှာ ရာဇ၀တ်မှုမှန်းသိရက်နဲ့ ဖြစ်စေ၊ မသိ၍ပဲဖြစ်စေ ပါဝင် ပတ်သက်နေသူတွေ အများအပြား ရှိလာပါတယ်။ ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လူသတ်မှုတခုမှာ သတ်မိသူကို စာနာနားလည် ပေးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သက်သေအထောက်အထား ဖျောက်ဖျက်ပေးရင်တော့ လူသတ်မှု ကြံရာပါ ဖြစ်သွားနိုင် ပါတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကနေ ပေါ်ထွက်သွားတဲ့ လုယက်မှုတခုမှာ လုယက်သူရဲ့ ဘ၀အခြေအနေကို စာနာနားလည် ပေးကြလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေ လုယက်ကြပါလို့ အားပေးလှုံ့ဆော်တာတွေ၊ လုယက်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ထုခွဲရောင်းချ ပေးတာကိုတော့ ဘယ်လိုနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေကမှ ခွင့်ပြုကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ smuggling of migrants ဟာ (၂၁) ရာစုကမ္ဘာရဲ့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရာဇ၀တ်မှုတွေကို နှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု တခုဖြစ်တဲ့အတွက် smuggling operations တွေမှာ သိရက်နဲ့ ဖြစ်စေ၊ မသိပဲ ဖြစ်စေ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းများကို ရှောင်ရှားပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ Rule of Law ရှိလာအောင် ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၁၆၊ ၈၊ ၂၀၁၁)
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ၊ အထူးသဖြင့် အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာ ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းမှုရာခိုင်နှုန်းက အတော်များပြားပါတယ်။ အာရှဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက ကျေးလက်ဒေသမှာ ရှိပြီး၊ အာဖရိကဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေရဲ့ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ စစ်တမ်းတွေမှာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ မြို့ပြသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် အခြေချမှုတွေ များပြားလာတဲ့အတွက် မြို့ပြဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားလာစေနိုင်တဲ့ အချက်တချက်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ပြောဆို ထားကြပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံအဆောက်အအုံကို လျစ်လျူရှုထားခြင်း၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အစိုးရအသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း နည်းပါးခြင်း၊ လယ်ယာမြေများကို အတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခြင်း စတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား လစ်ဟာချက်တွေကြောင့် ကျေးလက်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွေ မြင့်တက်လာပြီး၊ မြို့ပြဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွေပါ ထပ်ဆင့် မြင့်တက်လာတတ်ပါတယ်။
ကျေးလက်ဒေသမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေရဲ့ ၀င်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင်၊ အသုံးစရိတ်တွေအားလုံးဟာ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ တံငါနဲ့ ကျေးလက်အခြေပြု စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ၀န်ဆောင်မှု စတာတွေအပေါ်မှာ တည်မှီနေပြီး၊ အများစုကတော့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ တည်မှီနေတဲ့အတွက် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍရဲ့ ကြိုတင်မမြင်နိုင်သော အခက်အခဲတွေဖြစ်တဲ့ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု၊ မိုးခေါင်ရေရှားမှု၊ လေမုန်တိုင်းကျမှု၊ ရေကြီးမှု စတာတွေ ဖြစ်ပွားပြီး၊ လယ်ယာမြေတွေ ပျက်စီးသွားတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပွားလာတဲ့အခါ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို ထိခိုက်လာတတ်ပါတယ်။
ကျေးလက်ဒေသရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတရပ်က လူဦးရေထူထပ်မှု (population density) လျော့နည်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လျော့နည်းမှုတွေဟာ အခြေခံအဆောက်အအုံ (basic infrastructure)၊ ၀န်ဆောင်မှု အားနည်းချက် စတာတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှု ရှိတာကြောင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်းတွေအတွက် အရံအတား ဖြစ်လာစေပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသထုတ်ကုန်တွေကို မြို့ပြကို တင်ပို့တဲ့အခါ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ် ကြီးမားတာကြောင့် ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု (market competitiveness) ကျဆင်းလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့ assets accumulation နဲ့ income volatility management ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု သဏ္ဍာန်တွေကလဲ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ ရှိပါတယ်။ မြို့ကြီးများနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ကျေးလက်ဒေသ (Peri-urban areas) တွေမှာ ဈေးကွက်များသို့ ၀င်ရောက်နိုင်မှု အခွင့်အလမ်း များပြားခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများရှိခြင်း စတာတွေကြောင့်၊ ဝေးလံခေါင်ဖျား ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ ဖြစ်ပွား တတ်တဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ စစ်မက်ဖြစ်ပွားရာဒေသမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ကျေးလက် ပြည်သူတွေရဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကလဲ အခြားဒေသတွေထက် ပိုပြီး ဆိုးရွားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ပိုမိုးဆိုးရွားစေတဲ့ အရာတွေကတော့ ဓနရှင်မြေပိုင်ရှင်တွေရဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်မှု၊ အစိုးရရဲ့ လယ်ယာမြေမူဝါဒဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များ၊ လယ်ခွန်၊ ယာခွန် ကောက်ခံမှုများ၊ လယ်ယာမြေများကို မတရားရား သိမ်းယူမှု၊ လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့ rural dualism ပြဿနာကြောင့် ကျေးလက်နေပြည်သူအများအပြား အတိဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ လယ်သမား၊ ယာသမားတွေနဲ့ subsistence farming system အပြင် မြေပိုင်ရှင်ကြီးတွေနဲ့ commercial production system တွေကပါ အတူတကွ ယှဉ်တွဲတည်ရှိနေပါတယ်။
အကျိုးဆက်ကတော့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ လယ်သမား၊ ယာသမားတွေဟာ အရင်းရှင်၊ မြေရှင်တွေ၊ ငွေတိုး ချေးစားသူတွေရဲ့သွေးစုပ်ခြယ်လှယ် အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျမှုတွေကို ခါးစည်းခံရကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေ ဆိုးတွေကို လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဗျူရိုကရက်ယန္တရားက အားဖြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေဟာ ဆင်းရဲတွင်းထဲကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းလာကြရပါတော့တယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အားနည်းခြင်း၊ ဥပဒေဘက်တော်သားများက မြေရှင်၊ အရင်းရှင်များဘက်မှ ဘက်လိုက်ခြင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများရဲ့ အသံများကို အလေးမထားခြင်း၊ ပြည်ပပို့ကုန်များအား ဦးစားပေးစိုက်ပျိုးစေခြင်း စတာတွေဟာ ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု သံသရာလည်နေစေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေပါပဲ။
ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး မူဝါဒများ
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိခြင်းအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးမဟုတ်သော အခြားကဏ္ဍများရဲ့ တိုးတက်ရေးကို stimulate လုပ်ပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံတဲ့ agroindustries တွေကနေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ အစားအစာ ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းစေခြင်း၊ ကျေးလက်မှ မြို့ပြသို့ ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်မှုနှုန်းကို လျှော့ချပေးခြင်း စတာတွေကြောင့် မြို့ပြဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုပါ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့် ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပေမယ့်၊ ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးနိုင်ရေးအတွက် အခြေအနေအချို့ကို ဖန်တီးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ပိုင်ဆိုင်မှုကို အာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့် မြေယာဈေးကွက် (land markets) နဲ့ အရင်းအနှီးဈေးကွက် (Capital markets) တွေကို ထိခိုက်စေခြင်း မရှိရပါဘူး။ အရင်းအနှီးဈေးကွက်ကို ဖိနှိပ်မှုတွေ လုပ်လာတဲ့အခါ ဈေးကွက်ကို ထိခိုက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို နှောင့်နှေးစေတတ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း၊ အခွန်ကောက်ခံမှုနဲ့ ငွေလဲလှယ်နှုန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေကို စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွေကို penalize လုပ်ခြင်း မရှိရပါဘူး။ ကျေးလက်ဒေသရဲ့ အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကို တိုးမြှင့်ပေးဖို့နဲ့ ကျေးလက်ဒေသရဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူတွေအတွက် safety nets တွေနဲ့ လူမှုထောက်ကူပြု အစီအစဉ်တွေကိုလဲ ဖန်တီးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မူဝါဒတွေ ချမှတ်ရာမှာ ဈေးကွက်နဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို ပဏာမထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဈေးကွက်တွေမှာ ထုတ်ကုန် (products), inputs နဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုပြီး ဈေးကွက် (၃) မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။ အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဆိုရာမှာ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံ (လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးရေး) နဲ့ လူမှုရေးအဆောက်အအုံ (ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ရေအလုံအလောက် ရရှိရေး) စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီအချက်အလက်တွေအပြင် ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို မိမိပိုင်လယ်ယာမြေအနည်းငယ်ကို ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးသူများ၊ အခြားသူများ ပိုင်ဆိုင်သော လယ်ယာမြေများကို ငှားရမ်းပြီး ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးသူများ၊ farm sector နှင့် non-farm sectors များတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရသော မြေယာမဲ့အလုပ်သမားများ နဲ့ အမျိုးသမီးများ စတဲ့ အုပ်စုကြီး လေးမျိုး ခွဲခြားပြီး၊ အုပ်စုတခုချင်းစီအလိုက် သင့်လျော်မယ့် မူဝါဒတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Land Inequality လျှော့ချခြင်း
မြေယာမဲ့ခြင်းနဲ့ လယ်ယာမြေအလုံအလောက်မရှိခြင်းတို့ဟာ ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ လယ်ယာမြေ အရည်အသွေး၊ အကြွေးရယူနိုင်မှုနှင့် ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးခြင်း၊ ပြည်သူ့ရေးရာဝန်ဆောင်မှု အားနည်းခြင်း စတာတွေလဲ ပါဝင်ပေမယ့် land inequality ကတော့ predominant feature ဖြစ်ပါတယ်။ land inequality လျှော့ချခြင်း၊ မြေယာအခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ share-cropping tenancy contracts တွေကို စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း စတာတွေ ရှိမှသာ ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
(၃) Microfinance (အသေးစားငွေချေး) စနစ် ကျင့်သုံးခြင်း
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ အများစုဟာ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍရဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေပေါ်မှာပဲ မှီခိုနေကြရပါတယ်။ အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေ နည်းပါးပြီး၊ ၀င်ငွေရဖို့ ရိတ်သိမ်းချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဓနရှင်၊ မြေရှင်၊ ကုန်သည်ပွဲစားတွေဆီက အကြွေးရယူသုံးစွဲရပြီး၊ ၀င်ငွေ ရလာချိန်မှာ အကြွေးတွေကို ပြန်ဆပ်ရတာကြောင့် ကြွေးယူသံသရာထဲကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်ပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကို ဓနရှင်၊ မြေရှင်တွေက အခွင့်ကောင်းယူပြီး အဆမတန် များပြားလှတဲ့ အတိုးနှုန်းတွေနဲ့ သွေးစုပ်ချယ်လှယ်ကြတာကြောင့် လယ်သမား၊ ယာသမားတွေဟာ နင်းပြားဘ၀ကို ကျရောက် ကြရပြန်ပါတယ်။ ဒီလို ဂုပ်သွေးစုပ်နေသူတွေ လျော့နည်းစေရေးအတွက် ကျေးလက်ဒေသမှာ Micro Finance Institutions (MFI) တွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အသေးစားငွေချေးစနစ်ကို လူ့အဖွဲ့အစည်းအခြေပြု အစီအစဉ်တွေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် target groups တွေကို ထိထိရောက်ရောက် အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
(၄) အခြေခံအဆောက်အအုံ (Infrastructure) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကျေးလက်ဒေသရဲ့ အခြေခံစီးပွားရေးအဆောက်အအုံနဲ့ လူမှုရေးအဆောက်အအုံတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုခြင်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို ရေရှည်မှာ ဖြစ်ထွန်းလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးမှာ အစိုးရတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အရေးကြီးသလို၊ လူမှုရေး အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း အားကောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
စာတတ်မြောက်နှုန်း မြင့်မားရေး၊ မူလတန်းကျောင်းများ ကျေးရွာအနှံ့ ပေါ်ထွက်လာရေး၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကူညီစောင့်ရှောက်မှုများ (ဥပမာ- အခမဲ့ကျောင်းကားများ ထားရှိရေး၊ ခရီးသည်တင်ကားများအား အခမဲ့ စီးနင်းခွင့် ရရှိရေး စသည်)၊ ကျေးလက်ဒေသ ဆရာ၊ ဆရာမများ အတွက် လစာနှင့် ခံစားခွင့်များ တိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြင့် ဆရာ၊ ဆရာမ ရှားပါးမှု ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းခြင်း၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းများ တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ရေး၊ ဒေသခံပြည်သူများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ပညာပေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ရေး၊ ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲချမှတ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ အကြံဥာဏ်များအား တောင်းယူခြင်း စတာတွေဟာ ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ထောက်ကူပြုပါတယ်။
(၅) စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများအား သုတေသနပြုခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးအသုံးပြုခြင်း
စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ စတာမှာ အများအားဖြင့် မြေယာနှင့် ရေအရင်းအမြစ်၊ ဇီဝဓာတုနဲ့ စက်မှု ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍသုံးခု ပါဝင်ပါတယ်။ မြေယာနှင့် ရေအရင်းအမြစ် ကဏ္ဍမှာတော့ မြေဆီလွှာပျက်သုဉ်းမှု လျော့နည်းရေး၊ တသီးစားမှသည် နှစ်သီးစား၊ သုံးသီးစား နိုင်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေ အလုံအလောက်ရရှိရေး စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဇီဝဓာတု ကဏ္ဍမှာတော့ ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုခြင်း၊ သီးနှံအမျိုးအစားသစ်များပေါ်ထွက်ရေး၊ ထုတ်ကုန်များ အရည်အသွေး မြင့်မားရေး စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ စက်မှုကဏ္ဍမှာတော့ လက်မှုလယ်ယာကနေ စက်မှုလယ်ယာကဏ္ဍသို့ တိုးမြှင့်ရေး စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နည်းပညာသစ်များကို လုပ်ငန်းရှင်များ အကူအညီနဲ့ သုတေသန ပြုပြီးတဲ့အခါ အချို့သော လုပ်ငန်းရှင်များက နည်းပညာများကို တောင်သူလယ်သမားများကို ဖြန့်ဖြူးအသုံးချစေခြင်း မရှိပဲ၊ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတာတွေလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ အစိုးရက ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
(၆) အစားအစာ လုံခြုံရေး (Food Security)
အစားအစာ လုံခြုံရေးဟာ ၂၁ရာစု ကမ္ဘာရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေး မူဝါဒတွေမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာရတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥစ္စာဖြို၊ စားဖိုက ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားရှိပါတယ်။ စားဝတ်နေရေးမှာ အစားအစာဟာ အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေရဲ့ အများဆုံး ပမာဏကို အမြဲတစေ ဖြိုယူနေတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှု၊ ကုန်ဈေးနှုန်း၊ လုပ်ခလက်စာ၊ အလုပ်အကိုင် အတက်အကျတွေ ဖြစ်ပွားလာတဲ့အခါမှာ ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေရဲ့ အစားအစာ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်လာစေပါတယ်။ အစာအဟာရ မပြည့်စုံမှုကြောင့် လူသားတွေရဲ့ စွမ်းရည်တွေကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့ စွမ်းရည်တွေ ကျဆင်းလာတာနဲ့အမျှ ထုတ်လုပ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အစားအစာ လုံခြုံမှု မရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) လုံလောက်မျှတမှု မရှိခြင်းဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ negative externalities ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အစားအစာ လုံခြုံရေး မရှိတဲ့အခါ အစားအစာ ကူညီထောက်ပံ့မှု (food subsidies) တွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အစားအစာ ကူညီထောက်ပံ့မှု လုပ်နိုင်တဲ့ သဏ္ဍာန်တွေကတော့ ရိက္ခာများ ထုတ်ပေးခြင်း၊ food stamps လို့ခေါ်တဲ့ လူတဦးချင်းစီအလိုက်၊ အိမ်ထောင်စုအလိုက် အစားအစာတွေ ၀ယ်ယူနိုင်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏ တခုနှင့် ညီမျှသော အစားအစာ ၀ယ်ယူခွင့် လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ကျေးရွာအလိုက် supplementary feeding programs များ ဖော်ဆောင်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ အိမ်ထောင်စုတခုချင်းစီရဲ့ ၀င်ငွေပေါ် မူတည်ပြီး ၀င်ငွေနည်းပါးသူများကို အစားအစာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုတွေ၊ အသက် ငါးနှစ်အောက် ကလေးသူငယ်များနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ ပေးမှုတွေ၊ ဒေသတခုချင်းအလိုက် လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးမှုတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အစိုးရတွေက ဦးဆောင်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအပြင် အန်ဂျီအိုတွေနဲ့ အခြားစေတနာရှင်များက ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုတွေလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရရင် ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးဆိုတာ မြို့ပေါ်က ချမ်းသာသူတွေဆီက အလှူငွေ ကောက်ခံပြီး၊ ကျေးလက်ဒေသ ပြည်သူတွေအတွက် အသုံးပြုခြင်းကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတော်က ဦးဆောင်ပြီး သင့်လျော်မယ့် အစိုးရဘတ်ဂျက်များ ချမှတ်အသုံးပြုခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သင့်လျော်သော မူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ land inequality လျှော့ချခြင်း၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း အားကောင်းလာစေခြင်း၊ အစားအစာ လုံခြုံရေးအတွက် အန်ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ မြေရှင်၊ အရင်းရှင်များကို ဘက်လိုက်သော တရားစီရင်ရေး စနစ်များနှင့် ဥပဒေများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဘက်လိုက်သော ဥပဒေဘက်တော်သားများကို အရေးယူခြင်း၊ rural dualism ပြဿနာများကို တိုက်ဖျက်ခြင်း၊ ဗျူရိုကရက် မြေရှင်စနစ်ကို ဖယ်ရှားခြင်း စသည့် မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများဖြင့်သာ ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု သံသရာစက်ဝန်းကို ရပ်တန့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၁၄၊ ၈၊ ၂၀၁၁)
Behrman, J. (1993) “Macroeconomic policies and Rural Poverty: Issues and Research Strategies”, in Quibria, M.G. (ed) Rural Poverty in Asia, Oxford University Press, Hong Kong
Ashley, C. and S. Maxwell (2001) ‘Rethinking Rural Development’, Development Policy Review, 19 (4), Overseas Development Institute, London
Lipton, M. (2004) ‘New directions for agriculture in reducing poverty: the DFID initiative’.
Marsh, S. P. and T. G. Macaulay (2002) ‘Land reform and the development of commercial agriculture in Vietnam: policy and issues’, Agribusiness Review, Volume 10.
နိဂုံးချုပ်ဆိုရသော် ယနေ့ လက်ရှိ ကာလသည် အတွေးအခေါ်များ အလွန် ရှုပ်ထွေးနေသည့် ကာလတခု ဟု ဆိုရပေမည်။ အာဏာရှင်များဘက်မှ political liberalization ကို အကောင်အထည် စတင်ဖော်လိုက်သည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါ political liberalization ကို လက်ခံမည်လား၊ လက်မခံဘူးလား၊ အဆိုပါ အတွေးအခေါ်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင်သည်လား၊ မရနိုင်ဘူးလား၊ အစဉ်အဆက် ကျင့်သုံးခဲ့ကြသော အာဏာရှင်စနစ်ဖြိုချရေး အတွေးအခေါ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားမည်လား၊ မဆုပ်ကိုင်ထား ဘူးလား၊ ဆုပ်ကိုင်ထားလျှင်ကော အောင်မြင်မည်လား၊ မအောင်မြင်ဖူးလား စသည်တို့ကို တွေးတော ငြင်းခုန်နေကြရုံသာမက အတွေးအခေါ် နှစ်ခုကို ရောသမ မွှေထားသည့် အတွေးအခေါ်သစ်များပင် ထွန်းကားလာသည့် ကာလတခုဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးကို လွှမ်းမိုးထားသည့် အတွေးအခေါ်များနှင့် အုပ်စုများကို ခွဲခြားလိုက်ပါက အုပ်စုကြီး ခြောက်ခု ထွက်ပေါ်လာပါသည်။
(၁) Initial Transition အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံ၍၊ အဆိုပါ အတွေးအခေါ်က ဦးဆောင်သည့် လမ်းစဉ်များဖြစ်သော လူထုလှုပ်ရှားမှုများ၊ လူထုတိုက်ပွဲများကို ဖော်ဆောင်ကာ ရေတိုပန်းတိုင်အနေဖြင့် ကြားဖြတ်အစိုးရ (၀ါ) ပြည်သူ့အစိုးရ အသွင်သဏ္ဍာန် တမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်ရမည်ဟု စဉ်းစားသူများ။
(၂) Political Liberalization အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံ၍၊ အာဏာရှင်တို့ဘက်မှ ဖွင့်ပေးလိုက်သော political space များကို အသုံးချကာ နိုင်ငံရေးစည်းဝိုင်းအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ပြီး၊ တစတစ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများမှတဆင့် ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ လျှောက်လှမ်းမည်ဟု စဉ်းစားသူများ။
(၃) Political Liberalization မှ democratic consolidation ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ initial transition မှ democratic consolidation ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ civil society မှာ အဓိကကျသဖြင့် နိုင်ငံရေးရာများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိပဲ civil society အားကောင်းလာစေရန် ကြိုးပမ်းမည်ဟု စဉ်းစားသူများ။
(၄) ဘယ်သူသေသေ၊ ငတေမာရင် ပြီးရော ဆိုသည့် သဘောပိုက်ကာ ဖြစ်လာသည့် အခြေအနေတွင် အာဏာ၊ ရာထူး၊ နေရာ၊ အမည်ကောင်း၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား စသည့် အကျိုးအမြတ်များအား မည်သို့ ရှာမည်နည်း ဆိုသည်ကို စဉ်းစားသူများ။
(၆) political liberalization အတွေးအခေါ်ကို အသုံးပြု၍ အာဏာကို တတ်နိုင်သမျှ ဆွဲဆန့်ထားရန် ကြိုးပမ်းနေသော အာဏာရှင်များနှင့် အပေါင်းအပါများ။
ရောသမမွှေများမှာကား Initial transition အတွေးအခေါ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားသူများဟု လူအများက မြင်ထားလေ့ရှိသော်လည်း ထိုသူများသည် initial transition ၏ ရေတိုပန်းတိုင်ဖြစ်သော ကြားဖြတ်အစိုးရ ပေါ်ထွက်ရေးကို လက်ခံခြင်းမရှိကြ။ လူထုလှုပ်ရှားမှု လမ်းစဉ်များ၊ တော်လှန်ရေး လမ်းစဉ်များကိုလဲ လက်ခံယုံကြည် ဖော်ဆောင်ခြင်း မရှိကြ။ political liberalization အတွေးအခေါ်အရ ပေါ်ထွက်လာသော political space တွင်လည်း ပါဝင်ခြင်း မရှိကြ။ သို့ရာတွင် political liberalization အရ ချဲ့ထွင်လာသော public space အခွင့်အရေးကို ယူရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။ ယင်းသို့ ကြိုးပမ်း၍ တော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာစေပြီး initial transition အတွေးအခေါ်၏ ရေတိုပန်းတိုင်ဖြစ်သော ကြားဖြတ်အစိုးရ ပေါ်ထွက်ရေးကို ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမည်လားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ပြန်။ civil society အားကောင်းလာရေးကိုပဲ ဦးစားပေး လုပ်တော့မည် ဖြစ်လာပြန်သည်။
ယင်းသို့ဆိုလျှင် မည်သို့သော Civil Society ကို တည်ဆောက်ရမည်လဲဆိုသည်က မေးစရာရှိလာသည်။ အင်အားစုတိုင်း အင်အားဖြစ်သည် မဟုတ်ပါ။ တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားနှင့် ထူထောင်ရေး အင်အားအတွက် တည်ဆောက်မှုသဏ္ဍာန်၊ ပြင်ဆင်မှု သဏ္ဍာန် မတူညီနိုင်ပါ။ evolution အတွေးအခေါ်အရ ပေါ်ထွက်လာသော အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (collaboration) ပေါ်တွင် အခြေခံသည့် Civil Society ကို ၀ိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ရမည်လား၊ အစိုးရနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြားတွင် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးမှု (Mediation) ပေါ်တွင် အခြေခံသည့် Civil Society ကို ၀ိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ရမည်လား၊ အစိုးရနှင့် ပတ်သက်ခြင်း မရှိသော autonomous model ပေါ်တွင် အခြေခံသည့် Civil Society ကို ၀ိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ရမည်လား၊ သို့တည်းမဟုတ် နောင်ချိန်ခါ revolution တရပ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဆန့်ကျင်မှု၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု (confrontational model) ပေါ်တွင် အခြေခံသည့် Civil Society ကို ၀ိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ရမည်လား ဆိုသည်ကို ကွဲပြားစွာ သိဖို့ လိုအပ်လာပါသည်။
သို့မဟုတ်လျှင် အတွေးအခေါ်ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်၍ အင်အားစုသော်လည်း အင်အား မဖြစ်ထွန်းပဲ ဖြစ်သွားတတ်သည်။ အခြေအနေအရ လိုသလို ပြောင်းယူလို့ရသည့် အင်အားဆိုသည်မှာ အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်ပါသည်။ ဖောင်တိန်ကိုင်သူများကို ချက်ချင်း သေနတ်ကိုင်ခိုင်းလို့ မရ။ သေနတ်ကိုင်နေသူများကို ချက်ချင်း ဖောင်တိန်ကိုင်ခိုင်းလို့မရ။ တူကိုင်နေသူများကို ချက်ချင်းဓားကိုင်ခိုင်းလို့မရ။ ဓားရေး ကျွမ်းနေသူများကို ချက်ချင်း တူကိုင်ခိုင်းလို့မရ။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ယူရပြန်သည်။ လေ့ကျင့်နေဆဲမှာပဲ အင်အားက ပြန်ကွဲထွက်သွားပြီး၊ အခြေအနေနှင့် သဟဇာတ မတည့်ပဲ ပြန်ဖြစ်သွားတတ်ပြန်သည်။
အလုပ်နှင့် အတွေးအခေါ်များကို ရောသမမွှေလိုက်လျှင် လမ်းလျှောက်ရင်း လမ်းပျောက်သွားတတ်ပါသည်။ ပမာဆိုရလျှင် မြစ်ကမ်းတဘက်ဆီတွင် လမ်းလျှောက်ရင်း၊ ရှေ့ဆက်မသွားပဲ ဟိုဘက်ကမ်းသို့ လှေနှင့် ကူးလိုက်၊ ဒီဘက်ကမ်းသို့ လှေနှင့် ကူးလိုက် လုပ်နေသည်နှင့် တူလှသည်။ လှေရှိသူများက ကူးချည်သန်းချည် လုပ်ရန် မခက်ခဲသော်လည်း နောက်က တကောက်ကောက် လိုက်သူများမှာကား ရေထဲ ကျလိုကျ၊ မောပြီး ကမ်းပါးမှာ ငုတ်တုပ်ထိုင်သူက ထိုင်နှင့် ဘာလုပ်ရမည်မှန်းလဲ မသိ၊ ခရီးမတွင်ပဲ ဖြစ်ကြရတော့သည်။ ပိုဆိုးသည်က revolution နှင့် evolution အတွေးအခေါ် နှစ်ရပ်လုံးကို ရောသမမွှေထားလိုက်လျှင် Initial Transition အတွေးအခေါ်က ဦးဆောင်သည့် လမ်းများမှာလဲ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းမရှိ၊ political liberalization အတွေးအခေါ်က ဦးဆောင်သည့် လမ်းများပေါ်တွင်လည်း ကန့်လန့်ကန့်လန့်သဏ္ဍာန် ဖြစ်လာတတ်ပါသည်။
အိမ်ကို ဖြိုချပြီး ပြန်ဆောက်ရမည်လား၊ ဖြိုမချပဲ ဆေးသုတ်ပြင်ဆင်မှု လုပ်ရမည်လား ဆိုသည်ကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကြရာတွင် တခုတည်းကိုပဲ ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဖြိုချပြီး ပြန်ဆောက်ရမည် ဆိုလျှင် ဆေးသုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် အချိန်ကုန်၊ လူပမ်းပြီး အကျိုး မရှိသည့်လုပ်ရပ်များ ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ဆေးသုတ်ပြင်ဆင်မည်ဆိုလျှင်လဲ ဖြိုချရန် အားထုတ်ခြင်းသည် အချိန်ကုန်၊ လူပမ်းပြီး အကျိုး မရှိသည့်လုပ်ရပ်များသာ ဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးပရောဂျက်တခုတွင် ခေါင်းဆောင် တယောက်က ဖြိုချရမည် ပြောလိုက်၊ နောက်ခေါင်းဆောင်တယောက်က ပြင်ဆင်ရမည် ပြောလိုက် လုပ်နေကြလျှင် နောက်မှ အလုပ်သမားများက ဘယ်လို ကိရိယာတန်ဆာပလာကို ကောက်ကိုင်ကြရမည်နည်း။
အဆိုပါ အတွေးအခေါ် ရှုပ်ထွေးမှု အခြေအနေများသည် နိုင်ငံတော်အနာဂတ် ကံကြမ္မာအတွက် အန္တရာယ်ကြီးပါသည်။ မည်သည့် အတွေးအခေါ်ကို ကျင့်သုံးသင့်သည် ဆိုသည်မှာ လူတယောက်၊ အဖွဲ့အစည်းတခု၏ ကိုယ်ပိုင် ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါသည်။ လူ့သဘာဝအရ အမြင်မတူလျှင် အပြန်အလှန် စွပ်စွဲမှုကတော့ ပေါ်ထွက်နေမည်သာ ဖြစ်သည်။ initial transitionအတွေးအခေါ် ရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် political liberalization အတွေးအခေါ်ကို ကိုင်စွဲကာ political space တွင်းသို့ ၀င်သွားသူများသည် အရှုံးပေး၊ အညံ့ခံသူများ ဖြစ်ပြီး၊ political liberalization အတွေးအခေါ်မှ ကြည့်လျှင် initial transition ကို လက်ခံသူများသည် compromise မလုပ်လိုသော နိုင်ငံရေးအစွန်းရောက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ အပြန်အလှန်ရှုမြင်ပြီး၊ အပြန်အလှန် စွပ်စွဲပိုင်ခွင့် ရှိသော်ငြား ထိုသို့ စွပ်စွဲရင်းဖြင့် အချိန်မကုန်ကြစေလိုပါ။ initial transition လက်ခံသူများကလဲ ပါးစပ်ဖြင့် အာနေခြင်းများကို လျှော့ချ၍ ကြားဖြတ်အစိုးရ အသွင်သဏ္ဍာန်တမျိုးမျိုး ပေါ်လာရေးကို ကြိုးပမ်းသင့်ကြပါသည်။ political liberalization လက်ခံသူများကလဲ ချဲ့ထားသည့် political space လေးတွင်းသို့ ဘယ်လိုနည်းဖြင့် ၀င်ရ၀င်ရ၊ ရအောင်ဝင်ပြီး ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ကို အပြောမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ချီတက်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းသင့်ကြပေသည်။
ပန်းတိုင်မရောက်ခင် တက်မထောင်ချင်သော မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အစဉ်အလာဆိုးကြီးကို အလုပ်ဖြင့် သက်သေပြ၍ ဖျောက်ဖျက်ကြဖို့ အချိန်တန်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ initial transition က ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မည်လား၊ political liberalization က ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မည်လား ဆိုသည်မှာကား မူအရဆိုလျှင် အဖြေထွက်သော်လည်း လူအရဆိုလျှင် အဖြေမရှိပါ။ မည်သူမျှ တပ်အပ်သေချာ ပြောနိုင်မည်လည်း မဟုတ်သဖြင့် ငြင်းခုန်ရင်း အချိန်မဖြုန်းသင့်ကြတော့ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ အဖွဲ့စွဲများကို ဖယ်ရှား၍ အတွေးအခေါ် တခုကို ရွေးကြရမည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
(စာကြွင်း (၁)- ဤစာကို ရေးသားရာတွင် ကော်ဖီနှင့် လက်ဖရည် ဘယ်အရာက ပိုကောင်းသလဲ ဆိုသော မေးခွန်းသဏ္ဍာန်ကို ဖြေရာ၌ ကော်ဖီ၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးနှင့် လက်ဖရည်၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး နှစ်မျိုးစလုံးကို ယှဉ်တွဲဖြေဆိုသော ရှုထောင့် မှ ရေးသားထားသည်။ ကော်ဖီနှင့် လက်ဖရည် ဘယ်အရာကို ပိုကြိုက်သလဲ ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မေးခွန်းသဏ္ဍာန်ကို စာဖတ်သူတဦးဦးမှ မေးလာပါလျှင်ကား initial transition နှင့် political liberalization အတွေးအခေါ် နှစ်ရပ်တွင် စာရေးသူ ယနေ့အချိန်အထိ လက်ခံကျင့်သုံးနေသော အတွေးအခေါ်မှာ initial transition အတွေးအခေါ် ဖြစ်ပြီး၊ လမ်းစဉ်မှာ လူထုတိုက်ပွဲလမ်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ရေတိုပန်းတိုင်မှာ အတိုက်အခံများက ဦးဆောင်သော ကြားဖြတ်အစိုးရ (သို့မဟုတ်) လူထုတိုက်ပွဲတွင် ပြည်သူများနှင့် ပူးပေါင်းလာသော မျိုးချစ် တပ်မှူးများနှင့် အတိုက်အခံများ ပူးတွဲဖွဲ့စည်းသော ကြားဖြတ်အစိုးရဖြစ်ပါသည်။
စာကြွင်း (၂)- မူရင်းဆောင်းပါး၏ နိဂုံးအား စာနှစ်ပိုဒ် ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ထားပြီး (၂၅၊ ၇၊ ၂၀၁၁) တွင် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပါသည်။)